महोत्तरीका ११ जना सहित प्रदेश २ बाट १४८ जना कहाँ बेपत्ता भए ? पीडितले गुहारे सिडियो - Shirish News
महोत्तरीका ११ जना सहित प्रदेश २ बाट १४८ जना कहाँ बेपत्ता भए ? पीडितले गुहारे सिडियो
२०७८ भाद्र १५, मंगलवार ०६:४३ बजे
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारले आफन्तको सास वा लास दिन माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार पीडित परिवारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–२ बस्ने वीरेन्द्रकुमार यादव सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका सर्लाही जिल्लाको एरिया कमिटी मेम्बर (एसिएम) थिए । वीरेन्द्रका अनुसार उनलाई खोज्नका लागि नेपाली सेनाको टोली उनको घर गइरहन्थ्यो । ०६० साल कार्तिक २० गते वीरेन्द्रको घरबाट आफ्नो बुबा, काका, दुई भाइसहित ७ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर लगेको उनले बताए । ‘त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म पनि उनीहरुको सास वा लासको अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने ।
आफ्नै आँखा अगाडिबाट लगिएका पतिको अवस्था शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक हुन नसक्नुले ठुलो पीडा भइरहेको धनुषाको मिथिला नगरपालिका, लालगढकी सिर्जना शाही बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘उहाँ (पति)को हत्या भएको हो कि जिउँदै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउन पनि सकिएको छैन, अहिले न म विधवा बनेर हिँड्न सकेकी छु, न त विवाहिता महिला भएर हिँड्न सकेकी छु ।’
धनुषाको सबैला नगरपालिका–२ बस्ने प्रकाश यादवको परिवारको पीडा पनि करिब करिब उस्तै छ । उनको दाजु शम्भु यादव माओवादीको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको जिल्ला नेता थिए । नेपाली सेनाको टोलीले सबैलाको भटिहनबाट शम्भुलाई २०५५ साल कार्तिक १९ मा पक्राउ गरेर लग्यो ।
त्यसपछि प्रहरी प्रशासन, सेना लगायतका निकायमा सोधखोज गर्दासमेत कतै कुनै पनि जवाफ पाउन नसकेको प्रकाश बताउँछन् । बुबाको मृत्युपछि दाजुले नै घर सम्हालेको स्मरण गर्दै उनले दाजुसमेत पक्राउ परेपछि आफ्नो परिवारले निकै दुःख खेपेको बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले सोमबार आफन्तको सास वा लासको माग गर्दै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । माओवादी जनयुद्ध अन्त्य भई शान्ति प्रक्रियामा आएको यतिका लामो समय भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाहरुको वास्तविकता पत्ता लाग्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पीडित परिवारको भनाइ छ । उनीहरुले राज्यबाट १० लाख रुपैयाँ बुझ्ने बाहेक कुनै प्रकारको सान्त्वनासमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा प्रदेश २ का सप्तरीबाट २८, सिरहाबाट ३७, धनुषाबाट ११ (५ जनाको भव भेटिएको), महोत्तरीका ११, सर्लाहीका १७, रौतहटका २०, बाराका १२ र पर्साका १७ गरी १४८ जना बेपत्ता पारिएका छन् ।